Weelka qurxinta, Dhalada kareemka, Weelka Jirka kareemka, Weelka looxa loo yaqaan 'Acrylic Jar' - Sich
15ml Top Fasalka Acrylic Small Qurxinta Weelka ...
SHAOXING XANUUNKA qurxinta qurxinta xaddidan
SHAOXING SICH COSMETICS xirxirida XADDIDAN [Yuyao Langrun Warshad caag ah] waa soo saaraha xirfadle ah ee wax soo saarka xirxirida caag ee Shiinaha, oo ku yaal magaalada Yuyao. Shirkaddayadu waxay gebi ahaanba daboolaysaa qiyaastii 1,000 mitir murabac.
waxyaabahayagu badanaa waa alaabooyin baakado caag ah oo la isku qurxiyo. Waxyaalaha lagu daboolayo waxay yihiin: dhalooyinka kareemka caagga ah iyo dhalooyinka looshan, dhalooyinka acrylic-ka j Dhalooyinka PP / PS iyo dhalooyinka comp isafgaradyada la isku qurxiyo ， musmaarrada iyo waxyaabaha kale ee la isku qurxiyo. Waxaan inta badan la macaamilnaa ganacsiga dhoofinta u janjeedha, waxaanan siineynaa xalka xirmooyinka noocyo badan oo caan ah oo la isku qurxiyo gudaha iyo dibedda.
Waxaan leenahay naqshadeynta gudaha iyo sameynta koox, mashiinka qurxinta midabka otomatiga ah, daabacaadda shaashadda xariirta iyo mashiinka kuleylka kulul ee calaamadeynta iyo moodooyinka kala duwan ee mashiinnada la isku duro iyo kuwa lagu afuufo. Dhammaantood waxay gacan ka geysan doonaan alaabooyin tayo sare leh isla markaana si dhakhso leh u keenaya
Maxay xirmooyinka qurxinta u kala duwan yihiin ...
Xilligan, kaliya 14% baakadaha balaastigga ah ee adduunka oo dhan ayaa dib loo cusbooneysiiyaa-kaliya 5% qalabka ayaa dib loo isticmaalaa ...
Qaar badan oo ka mid ah baakadaha ayaa la sameeyaa o ...
Qaar badan oo ka mid ah baakadaha waxay ka samaysan yihiin muraayad ama akrilil. Si kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay, waxaan helnay wax badan ...
Falanqaynta faa'iidooyinka iyo d ...
Suuqa caaga balaastikada aduunka ayaa lafilayaa inuu si aad ah uboqo inta lagu gudajiro mudada saadaasha. Gr ...
Imaatin cusub Dhalo bilaa duul ah –...
Dhalooyinka bambooyin la'aanta ah waxay ilaaliyaan alaabada xasaasiga ah sida kiriimyada daryeelka maqaarka dabiiciga ah, serumyada, caatada ...
Weelka Wax lagu qurxiyo ee Qurxinta leh oo Dhex Dhexaad ah, Dhalada Madow Gel Polish, Jar kareemka indhaha, Weelasha Kariimka Qurxinta, Baakadaha Qurxinta Qurxinta, Jar kareemka la isku qurxiyo,